25 mfe Ista Crafts maka Kidsmụaka na Mee N'onwe Gị Projects 2021 - Ezinụlọ
Ekeresimesi Ista 25 nke umuaka ka ha debe umu obere aka ha
25 Easter Crafts Kids Keep Your Little Bunnies Occupied
amazon kacha ọhụrụ na fim
Ọzọ ezumike dị anyị, ndị enyi, na nke ahụ pụtara na ị nwetara ọzọ ọlaedo ohere na-na-eto eto na-ezumike na-arụsi ọrụ ike na ụfọdụ festive nkà na nka ọrụ. Site na nsị Mee N'onwe Gị gaa n'osisi ndị na-eme ememme, lelee usoro ọrụ Ista dị mfe maka ụmụaka nke afọ niile. Nke kachasị mma? Mgbe nwa gị ka ji ọrụ ya okike Ista-y na-achụ, ị ​​nwere ike iwe obere oge iji zuru ike (ma daba n'ime ya niile na Ista swiiti ).
Njikọ: 35 Easter Cupcake echiche ndị dị mfe ịme ma dị mma
Dị Ọcha na Eche
1. Ista Ista
Nye ụlọ gị a festive aka na nke a pom pom Ista Boni binta. Ekele maka ndebiri n'efu, ihe ndozi ezumike a enweghị ike ịdị mfe ọrụ. Na mgbakwunye, enwere ike ịmegharị template ahụ n'ọtụtụ ụzọ ọ bụla, yabụ ị nwere ike ịnwe mmụcha ewi maka ụbọchị.
Nweta nkuzi ahụ
Echiche kachasị mma maka ụmụaka
2. Ista Suncatcher
Oge oyi na azụ azụ na Ista gburugburu, ndị a suncatchers a mara mma dabara adaba maka ezumike ahụ. Na mgbakwunye, ihe ndozi windo a ọeryụ na-abịakọta ọnụ yana obere ihe - naanị mpempe akwụkwọ , laminating akwụkwọ na kaadị -Na mpempe akwụkwọ a na-ebipụta ebi na-emesi ọrụ nzuzu maka ụmụaka nke ọgbọ niile.
Otu Obere oru
3. Mee N'onwe Gị Agba Ista Galaxy
Chọpụta, ọkọlọtọ pastel agba ndị dị mma… ma ndị a galaxy-themed Ista na àkwá bụ ihe ịrụ ụka adịghị jụụ. Nke kachasị, ọdịdị a dị ịtụnanya bụ ihe ịtụnanya na ọ dị mfe ị nweta n’enweghị ihe ọ bụla karịa mbọ aka na-egbukepụ egbukepụ-na-eburu n’uche na DIY a kachasị mma ịhapụ ndị okenye, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere nsogbu nwere ike.
Pink Stripey sọks
4. Optical Illusion Peeps
Ọ dịghị mkpa ka schlep gaa na ụlọ ọrụ nka maka ihe eji achọ mma, n'ihi na pensụl, akara na mpempe akwụkwọ bụ ihe niile ịchọrọ iji mee trompe l'oeil a. Nweta? Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ mmemme nke na-agba ọsọ ngwa ngwa, dị mfe na 100 pasent ụmụaka, onye a agaghị emechu ihu.
Oru aka Amanda
5. Ista Bunny Mason ite
Nye ụfọdụ larịị ite Mason ihe ọhụrụ mara mma nke nwere agba pastel agba nzu site na ngwa ngwa a di mfe. The free ewi template na-eme ka usoro a breeze-nnọọ mfe a nwa nwere ike ime ya-na okokụre ngwaahịa bụ oh-otú mara mma. Ego: Ozugbo ha gwụchara, ite ndị a na-eme ihe ndị magburu onwe ha maka ịchekwa swiiti Ista niile.
Obi Dị Aghọm Ihe
6. Akwụkwọ efere Ista Wreath
Ọ bụrụ na ị tụfuru ya, efere akwụkwọ nwee otutu ikike ime ihe. Ileba anya: Nke a dị mfe Ista wreath , nke na-eji efere mpempe akwụkwọ na ọtụtụ cardstock arụ ọrụ dị ebube. Bido n’ise ihe n’ụdị àkwá Ista abụọ - si n’ebe ahụ, i kwesịrị ị ga-egbutu ya ma mechaa mechaa ihe a na-acha swiiti a.
7. Washcloth Bunny nka
Anyị niile na-echegharị ihe ndị a na-agbachi n'ụlọ, ma akwa nhicha ahụ bụ otu mgbanwe anyị na-eyighị ka ọ na-abịa ... na ọ bụ ụdị onye na-agbanwe egwuregwu. Nke kachasị mma, usoro ebe a chọrọ ntakịrị karịa ụfọdụ mpịachi okike na ọrụ ejiri rụchaa bụ naanị akara aka ijide a Cadbury creme akwa . Ọ na-adịghị cuter karịa nke a, ndị enyi.
Nkwupụta nke DIY Serial
8. Ewi gafere SIgn
Tinye akwa agba na mpempe akwụkwọ ochie nke osisi ochie na ị ga-anọ ihe karịrị ọkara ka akara ngosi bunny arụrụ n'ụlọ. (Otu nke na-etu ọnụ maka mmụọ mara mma, na-adịghị mma.) Yep, ọrụ a dị oke mfe na-agbakọta ọnụ ngwa ngwa, nsonaazụ njedebe ga-eme ka ahịhịa gị dị obere karịa. Ozokwa, kedu ka Easter Bunny ga-esi mara ebe izoo akwa nile?
9. epslọ Pipụ
Ista nwere ụdị nke ya nke ụlọ gingerbread na anyị adịghị arahụ maka ya. Ọrụ a a na-eri eri bụ ụzọ dị egwu iji mee ka ụmụaka tinye aka na ya a STEM ọrụ —Ị maara, site n'imeju afọ ma onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na eze na-atọ ụtọ ugbu a n'otu mgbe — ọ ga-abụrịrị na ọ ga-ekwe omume. N'ezie, akụkụ kachasị sie ike ga-anwa ịghara iri swiiti niile.
10. Nnọọ Bunny Ista Brooch
Nke a na-atọ ụtọ ewi brooch na-ekwe nkwa iji tinye ụfọdụ ememe ememme gị Ista Day ekike na ọ bụ ihe ijuanya dị mfe ime. Ga-achọ nanị ole-na-ole, mmefu-enyi na enyi onunu-mmetụta, mama, kpara akpa na a pom pom-sere nke a, na ụmụaka nwere ike isonye fọrọ nke nta ọ bụla nzọụkwụ nke ụzọ.
11. Eggshell Mozis
Akwa akwa na àkwá ndị gbagọrọ agbagọ bụ nhọrọ doro anya iji zere ịla nsen Ista ozugbo ịchụ nta gafere ... mana gịnị banyere shells ndị ahụ niile? (Know mara, ihe akaebe nke nkà gị.) Ozi Ọma: E nwere ụzọ iji tinye ndị ahụ n'ọrụ, kwa. Ihe omuma a nke ichota ihe di iche iche bu ichota ihe di iche iche di iche iche na ocha ocha maka oru ndi gwuchara nke na-eme ka ha mara mma.
Ndụ Jennifer Dawn
12. Ista Egg Ihe ịchọ mma
Don’tkwesighi ịbụ onye isi nwe ụlọ iji jikwaa nke a, mana ngwaahịa emechara dị oke mma, agbanyeghị. Choo akwukwo ndi eji achọ mma, yarn na beads wee banye ya! Mgbe arụchara ọrụ (pere mpe), kwụgidere ihe ịchọ mma ndị a na windo gị ka ndị agbata obi gị niile nwee ike ịmasị ọrụ aka gị.
13. Mee N'onwe Gị Ista Bunny Bean akpa
Bugharịa igbe kaadiboodu maka oru mmefu ego nke na-ekwe nkwa ime ka umuaka nwee obi uto obuna mgbe emechara ha. E nwere ezigbo usoro a ga - eme na ịmepụta akpa bekee a, ma ọ bụ ihe ziri ezi ma nwee mmekọrịta ụmụaka. (Ọfọn, ma e wezụga n'ihi egbe ọkụ na-ekpo ọkụ akụkụ.)
14. Akwa Robin na-acha uhie uhie
Usoro ya enweghị iberiibe, ihe niile - kabeeji na-acha uhie uhie, ihe oriri edo edo —Nke a dị mma nke 100%, na akwa ndị a chọrọ mma mara ezigbo mma. (N’ezie, ọ fọrọ nke nta ka ha mara mma iri nri.) Otú ọ dị, ihe kachasị mma na nka akwa a Ista bụ na ọ dịghị ihe nkochi ime akwa chọrọ. Yabụ, nke a na-achọpụta ha niile igbe ndị ahụ.
15. Osisi Ngaji Bunnies
Enwere ike iji aka nwatakịrị a na-arụ ọrụ n'ime ụlọ a nwee ọ spoonụ na usoro a na-enye ọtụtụ ohere maka imepụta ihe. Oh, na anyi kwuru na oru a agwula bu stinkin ’mara mma? N'okpuru ala: Ọ bụrụ na ị nwetụbeghị ele anya n'elu ngaji ma hụ akwa Ista, ị na-efunahụ nnukwu ọrụ nka.
16. Bunny Handprint Kaadị
Ọrụ nka a dị mfe na-ekwe nkwa ijide obere aka n'aka site na mmalite ruo na njedebe. Nke ka mma, ọ na-adabere n'ihe ole na ole a maara nke ọma — pom poms, mama ụlọ akwụkwọ, ọkpọkọ paịper , anya googly , cardstock na (nke na-adịghị egbu egbu) -a usoro a chọrọ obere, ma ọ bụrụ na ọ dị, site na onye toro eto. Weta nke a n’okpuru ‘Ista crafting win.’
17. Akwụkwọ Roll Bunnies
Enweghi oke ihe ị nwere ike ime site na ọkpọkọ mposi na-enweghị ihe ọ bụla ... na mpaghara nke ọrụ enyi na-amasị ụmụaka, ya bụ. Akwụkwọ a akwụkwọ mpịakọta bunny project ga-ejide n’aka na ụmụaka na-etinye aka, ọ bụkwa ikuku zuru oke iji mezuo. Nke kachasị, enwere ohere ị nwere ị nweta ihe niile achọrọ (mkpa, gluu, agba na akara) gbanye gburugburu.
18. Ọgba Baloon
Ofmụaka nọ n'afọ ndụ niile ga-enwe ọhụụ ọhụụ na balloons, na ihe oriri Ista ndị a na-egwuri egwu na-adị mfe ma na-atọ ụtọ ịme. (Onye na-enweghị mmasị na ọrụ ngosi nka na-enweghị ihe nkiri?) Ọzọkwa, ngwaahịa a rụchara ga-eme ka ị mụmụọ ọnụ ọchị-yabụ kpachara anya ịchọta ebe dị mkpa maka ụmụ okorobịa ndị a.
19. Nnu Ista Agba Nchara
Ọ bụrụ na ịnwalebeghị nnu iji rụọ ọrụ nnu na nwa gị, ị ga-enwerịrị ihe abụọ: Usoro a dị mfe na-agba ume iji aka sitere na ụmụaka nke afọ niile na usoro ahụ na-enye ahụmịhe na-enye afọ ojuju iji buut. Na mgbakwunye, mpempe ihe ọ rụpụtara mara ezigbo mma iji gosipụta ya.
Mama m na-achọ
20. Akwụkwọ Mache Easter nsen
Ọrụ Papier-mâché chọrọ oge na ndidi (ị maara, dị ka ikiri gluu) ma ụgwọ ọrụ kwesịrị mgbalị ahụ. Ebe a, Papier-mâché na ewute na-enye udidi na visual mkpuruedemede nsen Ista-ọgwụgwụ pụta na ọkọlọtọ akwa decorating kit dị nnọọ ike ijide a aka na.
arụrụ n'ụlọ agwọ ọrịa maka dandruff na ntutu ọdịda
Obi ụtọ na-aga kechioma
21. Easter Bunny eriri Art
Ihe omuma a di omimi di otutu ndi okenye, umuaka nwere ike gbalie aka ha. N'eziokwu, ọ bụrụ na i jiri otu a rụọ ọrụ, ngwaahịa a rụchara nwere ike ọ gaghị eyi ihe na-adọrọ mmasị-mana ọ ga-enye ntụrụndụ ma na-enye ezigbo ikike iji ụgbọ elu eme ihe nkwado, yabụ anyị ga-akpọ ya mmeri.
22. N'onwe Ista Egg Wreath
Nke a ezumike wreath nwere mkpebi mara aesthetic-nke ukwuu, ị ga-echeghị na ọ malitere site na akwa plastic dollar store. Yep, kpoo akwa ndị ahụ neon nwere agba nzu (na agba agba, n'ezie), rapara ha na akwa raffia wreath na voila ... mmezi ị nwere ike kpọgidere n'ọnụ ụzọ gị.
23. Mandarin Ista Bunnies
Anyị kwuru banyere oke ọrụ aka anyị na-eri? Nke a bụ nke ọzọ-na nke ugbu a anyị anaghị amanye swiiti, ebe ọ bụ na ọrụ Ista a mara mma gụnyere ịmịchaa mkpụrụ citrus kwesịrị ekwesị. Jidere nwatakịrị ma bido-ị abụọ ga-enwe ntiwapụ (na onye ọ bụla ga-enwe ekele maka nri nri Ista nke na-esiteghị n'ọrịa shuga na-adịghị mma).
24. Akwụkwọ efere Ista Puppets
Efere mpempe akwụkwọ nọzị ọzọ na nke ugbu a — nke ugbu a dị ka ihe bụ isi a na-eji agba puke Ista. Ofmụaka nọ n'afọ ndụ niile nwere ike isonye na usoro ahụ (enwere ọtụtụ ịcha na ịcha ihe) na obere ụmụaka ji n'aka na ha ga-agbachapụ iji mepụta puppet hop na-agagharị.
25. Ista Egg Weebles
Ozugbo ihe niile swiiti ahụ eripịala, weghachite akwa nsị plastik ndị ahụ na ọrụ dị mfe DIY Weeble. Nke a decorating ọrụ bụ ụzọ magburu onwe ya na-ụmụaka na-atọ ụtọ mgbe fun nke Ista egg ichu nta abịa na njedebe na ihe na-ọgbaghara-free na mfe procure-dị nnọọ ijide n'aka na e nwere onye toworo eto na njikere maka ọkụ mama egbe akụkụ.
Njikọ: Ihe egwuregwu 20 na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe maka ụmụaka
egwuregwu maka ndị okenye
ịhụnanya akụkọ nkiri bekee
egwuregwu kaadị maka ụmụ agbọghọ